Mogadishu Journal » Qaybta Seddexaad 3
uraastii sugitaanka ayuu kusoo laabtay isagoo aan waxba hubin, dhinac uu wax u fasirtana weli garanla’, isla maarkaasna wiilkii yaraa ayaa bilaabay inuu ku ooyo. Masaasaddii oo hadda caanihii kasii dhammaanayeen ayuu afka u geliyey, si uu ugu aammusiyo, laakiin kuma guulaysan oo wiilka yar, oo ay ka muuqato inuu hooyadii tebayo, oohintii cirka ayuu ku shareeray, oo afkuu furtay, hawlo kale oo aan Diirshe xallintooda garanayn, aanse sanka u raaxaynaynna waa kusii daray.
‘war qoftu waa ummul oo musqushay malaha ku yara raagtaye ama xoogaa sug oo iska fadhi ama, ha is waaline si deggan u raadi; waxaaba laga yaabaa illeen waa gabar yare inay is heleen mid ay isku xaafad ahaan jireen oo sheekadii la tagtay’ ayuu is yiri, isagoo aad mooddo inuu hadda si kas iyo maag ah qalbiga isugu dejinayo. Tan dambe ee raadraadinta ah baa la fiicnaatay, dabadeedna inta wiilkii yaraa, oo aad u ooyaya la kacay, ayuu markale musqulaha dumarka ku dhaqaajiyey. Qof dumar ah oo kasoo baxday ayuu su’aaley inay ku aragtay gabar yar oo garbasaar guduudan xiran oo fanax leh. Iyadoo aan eegin ayay, iyadoo sanka ka daboolanaysa ilmaha yar, ee aadka ugu baahan in naabbiga laga beddelo, inta tallaabada sii boobtay tiri ‘maya … maya qofna kuma jiro musqusha’. Xagga gudaha ayuu soo aadey, waxayna dhexda isku dhaafeen nin uu dharkiisa ka garanayey in uu dhakhtarkii yahay oo musqusha ragga kusii degdegaya. Waxba ma weydiin karayn waayo dhakhtarku uma istaagine inta isha ku xaday, ayuu kasii gudbey. Luuq musqusha dhanaceeda ah oo albaab leh, laakiin markaas furan ayuu Diirshe horay usii raacay; waxyar kaddibna wuxuu arkay inuu isbitaalkiiba bannaanka uga soo baxay oo uu joogo duleedka isbitaalka. Dib isbitaalka intaanu ugu laaban, ayuu is yiri ‘ armay iyaduna sidaan oo kale uga soo baxday, bal meelahan ka eeg-eeg’. Dhanka midig ayuu u yara leexday oo xoogaa sii socday, isagoo gidaarka isbitaalka ku dhow, iskuna cariiryaya dhexda laamaha geedka booc-boocda, oo aad mooddid inuu meeshaba xiray.
hakhtarkii dadka arkayey, oo dariishadda daaheeda iska furaya, ayaa arkay ninkaan oo booc-boocda la dhex xulaya wax isaga ula ekaa ilmo yar oo maro ku duuban. Sabab macquul ah, oo ilmo sidaas u yar, oo maryo ku duuban, hooyadiisna la socon, sida argagaxa lehna u ooyaya, meel noocaas ah lagala doono ayaana yaab ku noqotay. Si degdeg ah inta daahii u xiray, oo miiskiisii dib usoo fariistay ayuu taleefan u diray guulwadayaashii waardiyaha ka ahaa ganjeellada isbitaalka, iyo weliba Saldhigga Booliiska xaafadda Hodan.
iirshe oo soo laabtay, oo markaas albaabkii dambe ee uu sida caalwaaga ah uga baxay kala soo gelaya wiikii yaraa oo weli ooyaya, ayaa waxaa dhinacyada kaga yimid afar guulwade ah oo labbisan oo aan dheg la qabto lahayn. Mid kammid ah ayaa si degdeg ah uga qaaday wiilkii yaraa, saddexdii kalena inta hal mar sida yeyda ugu degeen, oo dhirbaaxo iyo laad ka badiyeen, ayay jeebbo gacmaha kaga adkeeyeen, isagoo in wax loo sharxo iyo in aanu dembi gelin ku qaylinaya. Daqiiqado yar kaddibna waxaa kusoo biiray Kabtan Takar, oo ahaa taliyaha Saldhigga Booliska xaafadda Hodan iyo saddex askari oo uu watey. Waxaa kaloo yimid dhakhtarkii taleefannada diray oo weli istedoskoobkii (stethoscope) qoorta uga laalaado, oo isna kalkaalisadiisii Ladan, ay la socoto. Waxaana kusoo aruuray dadkii isbitaalka dadka jiifa soo booqanayey, qaar kammid ah bukaankii, shaqaalihii iyo dad kale oo badan, oo isla markiiba la gaarsiiyey inuu isku deyayey inuu wiilkiisa yar booc-boocda ku dhex duugo. Booliiskii ayaa inta dadkii kala dareeriyey u sheegay guulwadihii inay jeebbada ka furaan, ilmihiisana u dhiibaan isaga, dabadeedna isagoo wiilkii yaraa ku raran, ayay, iyagoo dhakhtarkii hoggaaminayo geeyeen, halkii dhakhtarku ku arkay isagoo ilmaha la wareegaya.
artii inta la istaajiyey ayaa Kabtan Takar kaga qaaday sawirro dhawr ah dabeedna, inta wiilkii yaraa laga qaaday ayaa jeebbadiisii lagu celiyey, ‘Adeer bal horta ila hadla oo dambiga aan galay oo sidaan la’iigu gelayo maad iga dhaadhicisaan’ Diirshe ayaa yiri isagoo si naxariis-doon ah Kabtan Takar indhaha u siinaya. ‘Wada, wada ku tuura gaariga, oo dhinacyada ka fariiska yaanu ka boodine’ ayuu isla markiiba amar ku bixiyey kabtankii, isagoo jawaab ahaanna uga daba tuuray ‘adeer qof aan dembi gelini hadduu jiro adiga ma ahee, waa ninkaan yar oo saaka aadka u sigtay’. Kabtan Takar inta dhakhtarkii gacan qaaday oo mahadiyey ayuu gaarigii booliska oo Land Rover ahaa horay usoo fariistay. Markay yimaadeen Saldhiiggii xaafadda Hodan, isla markiiba Kabtan Takar inta xafiiskiisa ku orday ayuu taleefan u diray Laanta Hanuuninta ee xaafadda Hodan oo ay xiriir wada shaqayn arrimaha bulshada ah lahaayeen. Waxaana isla markiiba saldhigga soo gaarey hooyo Faadumo oo laanta haysatey iyo laba islaamood oo la shaqeeya.
‘Waa kan wiilka aan rabo inaad noo sii haysaan ilaa aan arrintiisa baaristeeda dhammaystiraynno, wixii kharash ah ee hayntiisa ku baxana, xisaabiyaha saldhigga usoo gudbiya’ ayuu yiri Kabtankii isagoo askarigii wiilka yar sideyna u muujinaya inuu hooyooyinka ku wareejiyo, Diirshe oo jeebbaysanna meesha weli lagu hayo. ‘Alla bal eeg sida uu ugu egyahay, waxaad mooddaa in laga jeexay?’ hooyo Faadumo ayaa tiri markay wiilkii yaraa wejigiisa aragtay. ‘uu’u, uu’u, uu’u Alla naa bal walaaley dhegihiisa eeg, kan barqo cad buu dhalay. . . war eeddo maxaa kugu dhacay nin dhallinyaro ah oo xoog leh baad tahaye, maxaa isaga xooraysaa wiilkaaga yarka ah, maad iska haysatid xataa haddii hooyadiis kaaga carartay maad adigu hooyadaa u geysatid’ islaantii kalaa tiri iyadoo hadalka u wadda Diirshe oo ciil iyo ceeb inuu suuxo ku dhow, wixii dad saldhigga joogeyna kusoo aruureen. ‘Alla ba’nayeen maxaa dhallinyaradii ku dhacay, bishii horena ma xasuusataa tii Afgooye laga soo qabtay oo la lahaa waxayba rabtey inay webiga raacsiiso gabar ay dhashay oo hal toddobaad ka yar, naa xaggee ba’aani inooga yimid?’ tii saddexaad baa kusii dartay. Islaamihii laantu waxay irridda saldhigga kala baxeen ilmihii yaraa, oo inta oohintii ka dhammaatay, daalkii hurdo la dhacay.
iirshe inta saacaddii laga furay, kabihii iyo suunkiina laga siibey, ayaa lagu tuuray qol gaar ah, oo mugdi ah, aanna haba yaraatee lahayn wax gogol ah. Isagoo aan waxba arkayn, oo gidaarrada qolka taataabaasho ku raacaya ayuu inta meesha ugu dambaysa tegey, oo shamiitada qabow ku fariistay, dhafoorrada labada gacmood saaray, gidaarkana dib isugu tiirshey. ‘tanna ma ii dambaysey!?. . . .. .. . . .’
©Said Farah 2012 Reproduction for online reading solely through www.mogadishujournal.